Siilaanyo ma Seeflabood buu noqday?
Saddex bilood ka hor haddii doorasho madaxtinimo laga sameyn lahaa Somaliland, shaki la’aan waxaa ku guuleysan lahaa Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo). Haddiise maanta cod laga qaado dadweynaha, ka noqod la’aan waxay dadka badankii ugu ridi lahaayeen Madaxweynaha hadda kursiga haya Daahir Riyaale Kaahin.
Mudane Daahir Riyaale, aragtideyda, wuxuu kulansaday laba waxyaabood oo aasaasi u ah dabciga hoggaamiye waddan; waa nin dulqaad badan oo daacad u ah dadkiisa. Waxaa intaa u dheer, waa nin qunyar socod ah, waana tan Soomaalidu tiraahdo “Qunyar socod qodaxi ma mudo.” Hal mar baan la kulmay Madaxweyne Riyaale - wuxuu iila ekaa nin deggan oo xasilan.
Sababta dadka badankii u jeclaayeen inay codkooda siiyaan Siilaanyo saddex bilood ka hor waxay ahayd, waxay u arkayeen nin hoggaamiye ah oo is beddel-doon ah. Waxayse hadda yaqiinsadeen inuu yahay siyaasi sedbursi iyo xoog wax ku doonaya oo halis ku ah nabadgelyada deegaannadooda.
Wuxuu yiri ninkii jiray, “Ninna waxaanu ka weynay war ummadda la hadal (Marxuum Cabdiraxmaan Tuur Alle ha u raxmadee), ninna waxaanu ka weynay war ummadda ka aamu (Marxuum Cigaal Allaha u naxariistee).” Haddaba waxay maanta maraysaa, “Ninna waa hurdayaa oo waxaanu ka la’ nahay war is beddel samee, ninna waa horor oo waxaanu ka la’ nahay war naga joog.”
Walaaca dadweynuhu qabaan ma ahan mid qarsoon. Siilaanyo wuxuu dadka caadiga ah ula muuqdaa inuu yahay nin doonaya inuu xididada u siibo xasiloonida iyo iftiinka ummadda nabadda ku nooli higsanayso, waayo lagama hayo wax degenaanshaha qalqal geliya mooyee, wax qalqaalo geliya.
Waxaa aniga isu key qaban waayey jaa’ifada ka dhanka ah Madaxweynaha Somaliland iyo gefka loo geysanayo xitaa gurigiisa (waa tii la xurmeyn waayey marwadii Madaxweynaha oo rag ka tirsan xisbiga Siilaanyo ee Kulmiye ay gefeen) iyo ummad baanu horumarinaynaa oo hagaajinaynaada Kulmiye.
Sarkaal sare oo xisbiga Kulmiye ka tirsan ayaa dhowaan ku dhawaaqay hadallo soo cusbooneysiinaya colaad oo ku baaqaya in ummaddu shaarica isku leyso, dhiigguna qubto, isagoo yiri, “Nin aan warankaagu gelin, warkaagu ma galo,” “xabadda waanu ka badinnaa Daahir Riyaale iyo asxaabtiisu,” iyo “dalka waa in dib loo xoreeyaa.”
Soomaalidu waxay tiraahdaa, “Gaal dil, gartiisana sii.” Madaxweyne Daahir Riyaale, wuxuu ku ammaanan yahay, illaa iyo hadda, sida sharafta leh ee uu dhegaha u cufeystay iyadoo waxaas oo gardarro iyo gaboodfal ah oo aan geed loogu soo gabban ay gurigiisa iyo gogoshiisa ku soo dhacayaan.
Dulqaadka iyo sabarka Madaxweynuhu muujiyey waa mid naadir ah oo aan weligeed horey loogu arag hoggaanka siyaasadda socota ee guud ahaan geyiga Soomaalida. Hadduu yahay nin dictator ah ama yahay nin macangag ah, nabadda Somaliland halis bay geli lahayd, waxayna ku dhici lahayd god aysan weligeed ka soo bixi karin.
Halkii uu ummadda uga horseedi lahaa jid ay ku halaagmayso oo mixnad ay madaxa la geli lahayd, Madaxweynaha waxaa muuqata inuu door biday inuu isagu dhabarka u rito wixii mushkilad ah oo dhan. Waxaa dhab ah in Daahir Riyaale lagu eedeeyo jil-jileec iyo tabar-darro dhinaca maamulka ah, taasna waxaa laga yaabaa inuu kaga jeedo maamul ballaarin.
Dadka oggol munaaqishada, wada tashiga iyo critical thinking xitaa ma aqbali karaan ijaafada iyo deelqaafka ka imaanaya Siilaanyo oo dadku ay u hanweynaayeen, waxaana ay tan ka luminaysaa wax taageero ah inuu ka helo dadweynaha oo hadda u arkaya inuu yahay nin seef la bood ah.
Siilaanyo waxaa socota beryahan, marka la eego sida wax u dhacayaan, inuu doonayo kursi qabiil, kuna doonayo magac qabiil – weliba siduu u handadalayo Daahir Riyaale uguma caga jugleyn jirin Marxuum Maxamed Ibraahim Cigaal.
Haddaba, waxaan leeyahay Siilaanyo kursi ummad ka dhexeeya waxaa kuugu dambeeyey kii lagu caana shubay Suldaan Muuse ee wadnaha gufeyso oo cagaha dhulka u dhig, candhuuftaadana dib u liq ama waxaad weligaa u muuqanaysaa nimanka la yiraahdo Neo-conservatives ee ku xareysan beerta Bush ee Crawford.
Wuxuu yiri nin gabyey, “Sagaal jeer haddaan laga darnaan kaa na kala soocay, siyaadoow siyaadoow, haddaan sannado lagu waalan, soo celi Allahayow haddaanu noqon sowdkiinu, Soomaali garac baan ka ahay ee taa ha la ogaado.’ Haddaba, reer Somaliland waxaa u roon inay deystaan Daahir Riyaalahooda, haddii kale waxay dhadhamin doonaan xanuunka Axmed Siilaanyo oo dhigay SNM meesha ay maanta ku moosan tahay.
Feysal Cali Waraabe isagu waa Ralph Nader. Mr Nader, waa nin Mareykan ah oo doorasho kasta oo madaxtinimo ah oo la qabto wuu isu soo taagaa. Wuxuu ka hadlaa wax dadweynaha dareenkooda taabanaya oo dadka Mareykanku ay jecel yihiin in wax laga qabto. Nasiib darro, dalka Mareykanka waxaa lagaga dhaqmaa nidaamka doorasho ee Electoral Vote iyo Popular Vote.
Sidaa awgeed, macquul ma ahan, marka la eego hannaanka soo xulista Madaxweynaha Mareykanka, in Nader ay doortaan odoyaasha dhiibta codadka Electoral Vote-ka. Sidaas oo ay tahay, Nader ma haro, dadkuna kama haraan, odoyaasha Mareykankuna codkooda ma siiyaan.
Doorashooyinkii Mareykanka ee 1996 iyo 2000 ayaa la ogaaday in Nader mar kasta codadka uu helo inuu ka helo dadweyne ka carooday xisbiyada Republican-ka iyo Democrat-ka. Sidaa darteed ayaa John Kerry musharrixii madaxtinimada ee Democrat-ka ee doorashadii sannadkii dhowaa wuxuu yiri, ‘Vote for Nader is vote for Bush,’ isagoo raba inaan qof ka tirsan xisbiga Democrat-ku codkiisa isaga qasaarinin Nader.
Haddaba, Feysal waxaa u fiican in Daahir Riyaale iyo Siilaanyo uu midkood raaco, si aanu u noqon Nader ee uu ugu yaraan u noqdo Raila Odinga oo kale. Waxaa ifafaale wanaagsan ah in maalmahaan ay muuqato inuu dhinaca Siilaanyo u sii dhowaanayo.
Hadday labada dhinac merger-sameeyaan, wuxuu Feysal la mid noqon doonaa Raila Odinga oo compromise la galay, lana heshiiyey Daniel arap Moi oo ay aabbihii Oginga Odinga 30 sano siyaasadda isku hayeen. Laakiin Raila wuxuu ku guuleysan waayey inuu is waafajiyo fekradihii uu ka dhaxlay aabbihii iyo kuwii Moi.
Feysalse, wuu ku guuleysan doonaa inuu mideeyo fekradaha UCID iyo Kulmiye, oo waa tan ay dhahaan dadweynaha caadiga ahi, "Siduu u hadal xun yahay, uma calool xuma."
(Ingiriis waa Suxufi Soomaali ah oo Philosophy ka barta University of Leuven).
Faafin: SomaliTalk.com | June 27, 2005
MAQAALADA KALE KA AKHRI HALKAN... GUJI..